#IBC2018: Dell EMC Inopa Kugadzikana Munharaunda YeBhodi - NAB Ratidza Nhau ne Broadcast Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Ratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE
musha » Featured » #IBC2018: Dell EMC Inopa Kugadzikana Munharaunda yeBhodi
#IBC2018: Dell EMC Inopa Kugadzikana Munharaunda yeBhodi
Dell EMC icharatidza muhotera #7.C39 pane IBC Show 2018 mu RAI Amsterdam, musi waSeptember 13th-18th, 2018. Vachave vachiratidza zvitsva muhutoriki hwekugadzira zvigadzirwa zvinosanganisira vaparidzi vemagetsi ekupedzisira, masangano emitambo, uye zvivako zvekugadzirwa kwemashure. Nekutanga kwekuwedzera kwe Virtual Reality michina ine vazhinji vanowirirana nevashandi vanogadzirisa kune unyanzvi hwekufambisa hunosimbisa huwandu hwemabhizimisi ehurumende yakawanda. Dell EMC vakazviisa ivo pachavo nekutsigira vatengi, vashandi pamwe chete, uye chigadzirwa chekugadzirwa mune zvemitambo nekuvaraidza.
Dell EMC mavhavhari akavakwa nokuda kwekuita basa rakaoma. Simba rinonzi PowerEdge MX rinofukidza zvose zvemabasa uye zvemangwana. Izvi zvakakosha zvikuru kuita modular kinetic infrastructure inobvumira software-yakatsanangurwa yedhizinesi yezvidzidzo, yakagadzirwa pasina midhi ndege, inoita kuti rubatsiro rwezvizvarwa zvakasiyana-siyana zvekombiyuta zvinosunungura-inyanzvi yekugadzira zvinhu, maitiro matsva ekuchengetedza uye hutsva hutsva hwekugadzirisa-uye munguva yemberi. Kupa rubatsiro rwemitemo mukubatana kwemaitiro akaoma, software-yakatsanangurwa kuchengetedzwa, software-yakatsanangurwa mitambo, njere dzekugadzira uye zvirongwa zvikuru zvekuita. Kutsigira yakaderera pasi latency NVMe inotya uye nharaunda 25GbE kubatanidza, chigadzirwa ichi "kuchema" kuburikidza nekushanda.
"Kunyange zvazvo hurumende inotanga kubuda, yakadai senyanzvi yekudzidzira, IoT uye software-yakatsanangurwa kuchengetedza uye kuwanana, inopa rubatsiro rwekukwikwidzana, basa ravo rinogona kuva rakaoma kufanotaura uye kuisa matambudziko matsva kumatare eTI," akati Ashley Gorakhpurwalla, purezidhendi uye mutungamiri mukuru, Dell EMC Server uye Infrastructure Systems. "PowerEdge MX inobatsira nzira yekugadzirisa kushandura mafungiro uye kusanganisira kuenzanisa, kuchengetedza uye kuwirirana, kuitira kuti masangano anokwanisa kushandura iyo IT nenzira inogadzirisa zvigadzirwa uye inopa kudzivirirwa kwekutsvaga kwekuchengetedzwa kwezvizvarwa zvemazuva anouya zvekufambira mberi kwezvinhu."
Simba rinonzi PowerEdge MX rinopa kushandiswa kwekugadzirisa uye rinopa imwe nzvimbo inoshamisa yezvikamu zvakadai se:
Dell EMC PowerEdge MX7000 chasisi - Inopa hutano hwakanaka hwehutano nehutsigiro hwevazhinji sevhareji yekugadzirisa zvizvarwa, mune zvidzidzo zvinogadziriswa nekugumira kwekupedzisira kwehupenyu hwehupenyu uye humwe humwe hutano hwezvinhu zvose, hunoita kuti masangano afunge zvakanyanya pane zvebhizimisi dzavo pane inochengetedza. Iyi 7U chassis inosanganisira masereji masere kuti agone zvakasiyana-siyana-uye nepamusoro-pakati-yakawanda compute uye kuchengetedza kusanganiswa.
Dell EMC PowerEdge MX740c uye MX840c inosanganisira zvidimbu - Shanduro mbiri neyechina dzakasungirirwa dzichiendesa zvizere-zvinoshandiswa, pasina kuisa maitiro, nekushanda kwakasiyana-siyana uye kuwanda kwezvigadzirwa zvekuchengetedza kusanganisira NVMe drives. I-single-width MX740c uye zvakapetwa kaviri MX840c inotsigira zvakakwana Intel® Xeon Scalable Processor mhuri ine kusvika pamatanhatu ematabhetesti ekuyeuka. MX740c ndiyo mabhizimisi chete e-width-single, maviri-shandi, modular server inogona kugara uye inosvika kumatanhatu e "2.5" NVMe, SAS kana SATA. MX840c inogona kuchengetedza kusvika kumashure masere.
Dell EMC PowerEdge MX5016s kuchengetedzwa sled - Dense, full-width, scale-out storage sleds inobatanidza maseva eMX, yakabata kusvika ku16 inopisa-inogadzirisa SAS kuchengetedza disk hard disk, ine marefu manomwe eMX5016s sleds muMX chassis kusvika kusvika ku112 inotungamirwa yakachengetedzwa . Izvi zvinogona kuiswa pamapuraneti imwechete kana kupfuura, zvichipa mukana wekuchengetedza wakadikanwa unoda kushandiswa kwemamwe maitiro.
Dell EMC PowerEdge MX Ethernet uye Fiber Channel switching modules - Izvozvi zvishoma pasi latency, yakakwirira-bandwidth switching modules yemitambo yakasiyana-siyana yevatisi inosanganisira zvirongwa zvakaitwa zvekuteerera kwetupiti, hutano hwehutano uye kuzviraramisa kwehuwandu hwehutano hwekushanda pamwe ne PowerEdge MX single management interface. PowerEdge MX ndiyo inotanga kushandiswa pakugadzirisa midziyo yekugadzirisa kupedza kwekupedzisira 25Gpbs Ethernet (GbE) uye 32Gbps Fiber Channel host connectivity. Yakabatanidzwa ne100GbE uye 32G Fiber Channel uplinks, vatengi vanogona kutarisira kusvika ku55% kuderedza mukushandura latency kwe-highly-scalable, multi-chassis fabric fabectures.
The Dell EMC PowerEdge MX ichave inowanikwa pasi rose munaSeptember 11th, 2018, uye ichava chigadzirwa chemavara pa #IBC2018 kokorodzano. Usapotsa mukana wekuita demo simba rinoshamisa iro Dell EMC mhuri inogona kugovera kumabasa ako. Booth #7.C39 pane IBC Show 2018 mu RAI Amsterdam.
Dell EMC, chikamu che Dell Technologies, inoita kuti masangano aongorore, agadzire uye agadzire deta yavo yedare vachishandisa indasitiri-inotungamira inoshandiswa zvivako, maserevhisi, kuchengetedza uye kuchengetedzwa kwemichina. Izvi zvinopa nheyo yakatendwa yebhizimisi kuti ichinje IT, kuburikidza nekusikwa kwegore rakavhenganiswa, uye kushandura bhizinesi ravo kuburikidza nekusika kwegore-nharaunda yekushandiswa uye makuru makuru ekugadzirisa. Dell EMC maitirwo emakambani munyika ye180 - kusanganisira 99 muzana ye Fortune 500 - pamwe nemakambani makuru ezvakanyatsoshandiswa uye anovandudzwa kubva kumucheto kusvikira kumigumo yegore.
Spears & Arrows rakapotsa chokwadi	2018-09-07
Previous: Grøn Mutambo Wechirongwa IMAG Powered by Blackmagic Design Live Liveflow
Zvadaro: Quantum Inounza StorNext Archive Solutions kuAvid MediaCentral Environments
Hey Buddy !, Ndakawana ruzivo urwu kwauri: "#IBC2018: Dell EMC Inopa Kugadzikana Munharaunda Yese". Heino nheyo yehungano yewebhu: https://www.broadcastbeat.com/ibc2018-dell-emc-offers-flexibility-pross-the-board/. Ndatenda.